गोरेटो समातेको संविधान
गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितेको छ । इतिहासको प्रवाहमय गतिमा पाँच वर्ष कुनै लामो समयावधि होइन । तर, बितेको पाँच वर्षको अवधिमा संविधानले गति समात्यो कि समातेन ? संविधान गोरेटोमा हिँड्न सक्यो कि सकेन ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरू... पुरा पढ्नुहोस्
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखा परेको तुफान थामिएको छ । करिब ६ महिनासम्म चलेको तुफानले पार्टीलाई नै तहसनहस बनाउँला कि भन्ने आशंका व्याप्त भइरहेकै बेला तत्कालका निम्ति विवाद किनारा लागेको छ । नेतृत्वबीच तन्किएको अन्तरविरोध टालटुल मात्र भएको हो वा... पुरा पढ्नुहोस्
संवादहीनताको तहसम्म ओर्लिसकेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच केही दिनपूर्व पार्टीभित्र उत्पन्न विवादलाई हल गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति बनेसँगै आम कार्यकर्ता र जनपंक्तिमा आशाको सञ्चार हुन पुगेको छ । केही महिनायता चरमचुलीमा... पुरा पढ्नुहोस्
युवाको आवाजलाई सुन
यतिबेला सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जटिल मोडबीच गुजिँ्रदैछ । पार्टी एकता कुनै निष्कर्षमा नपुग्दै चुलिएको अन्तरविरोधले सत्तारूढ दलले यतिबेला असहज र जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच... पुरा पढ्नुहोस्
सावधानी नै उत्तम विकल्प
सिंगो विश्वलाई कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त तुल्याइरहेकै बेला नेपाल सरकारले पनि यो महामारी फैलिन नदिन लकडाउन ग¥यो । २०७६ चैत ११ गते लकडाउन गर्नुपूर्व महामारीले भयावह रूप लिइसकेको थिएन । तर, त्यसपछिका दिनहरूमा भने संक्रमितको संख्या बढ्दै गयो । दिनदिनै... पुरा पढ्नुहोस्
के हामी बाँचिरहेको समाज, राज्यप्रणाली, न्यायिक धरातल अमानवीय, हृदयहीन र जड बन्दै गइरहेका हुन् ? पछिल्ला केही घटनाक्रमले यस्तो प्रश्न जन्मिन÷जन्माउन बाध्य तुल्याएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा आफ्नी पत्नीको हत्यापछि आजीवन काराबासको सजाय पाएका पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइरालाको कैदअवधि घटाएर कैदमुक्त... पुरा पढ्नुहोस्
सिंगो विश्व नै कोरोना भाइरसविरुद्ध सचेत, सतर्क र संगठित बन्न थालेको छ । करिब डेढ महिनाअघि चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाले अहिले विश्वव्यापी रूप लिएको छ । विकसित, विकासोन्मुख र कम विकसित सबै मुलुकका नागरिक कोरोनाको पीडा झेल्दैछन् । विश्वका... पुरा पढ्नुहोस्
विश्वव्यापी रूपमै आतंक र त्रास फैलाइरहेको कोरोना भाइरस अझै नियन्त्रण बाहिर छ । चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण विश्वका विभिन्न देशका नागरिकहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् र अझै कैयौं नागरिक प्रभावित भएका छन् । प्रायः सबै मुलुकले कोरोना... पुरा पढ्नुहोस्
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा सबभन्दा धेरै मौलाउने खेती हो– भविष्यवाणी । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पछिल्लो समय उत्पन्न अन्तरविरोधलाई लिएर अधिकांशले भविष्यवाणी गर्दै भने– अब नेकपामा विभाजन आउँछ, २०५४ साल दोहोरिन्छ । अर्को तप्काले भविष्यवाणी गरे– अब प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा... पुरा पढ्नुहोस्
कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्षदेखि सामान्य तहसम्मका नेता वा कार्यकर्ताले आफ्नो जन्मदिन कसरी मनाउने ? सामान्य तरिकाले वा भव्य रूपले ? केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिनमा देखिएको भव्यताले यस्ता प्रश्नहरू उब्जाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ६९औं जन्मदिन आफ्नै जन्मथलो... पुरा पढ्नुहोस्
मुन्टो चिमोट्दैमा मुल प्रकाण्डमा कुनै ताŒिवक असर पर्दैन । विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केवल मुन्टो चिमोट्ने काम मात्रै गर्दै आएको थियो । तर, बालुवाटारको जग्गा किर्ते गरेर बेचेको प्रकरणमा भने पछिल्लो समय आयोगले जुन कदम चाल्यो, त्यसले अब भने... पुरा पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा चिन्ता जाहेर गरे, ‘जनप्रतिनिधिहरू धरातलविहीन बन्दै गइरहेका छन् ।’ सरकार–प्रमुखले यस्तो जायज चिन्ता केही दिनपूर्व सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको शुभारम्भको बेला जाहेर गरेका हुन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको तीन वर्ष... पुरा पढ्नुहोस्
इतिहासमा दुई वर्षको अवधिलाई त्यति लामो मान्न नसकिएला । तर, विशेष परिस्थिति र सन्दर्भमा भने दुई वर्षे अवधि निकै महŒवपूर्ण, निर्णायक, शक्तिशाली र कुनै पनि राष्ट्रलाई नयाँ गति र दिशातिर डो¥याउने तथा जनतालाई उत्साहित तुल्याउने एक प्रखर मोड बन्न सक्छ... पुरा पढ्नुहोस्
केही दिनअघि अवैध रूपले खोला उत्खनन गरेर बालुवा झिक्ने कार्यमा संलग्न उत्खनन–माफियाको विरोध गर्दा धनुषामा एक युवाले जीवन गुमाए । आफ्नै घर नजिकको खोलामा अवैध तरिकाले बालुवा झिकिरहेका उत्खनन–माफियाहरूको प्रतिरोधमा उत्रिँदा दीलिप महतोले कल्कलाउँदो उमेरमै मृत्युवरण गरे । उनले नदी... पुरा पढ्नुहोस्
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वबीच मतैक्य कायम हुन नसक्दा सभामुख चयन अनिर्णीत बन्न पुगेको छ । सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि नबढ्दा अन्योल छाउन पुगेको मात्र छैन, संघीय संसदलाई बन्धक बनाउन सत्तारुढ दल नै उद्यत देखिएको प्रस्ट छ ।... पुरा पढ्नुहोस्